Heshiiska dawlada iyo ahluna oo si weyn u dhaqan galay: SAWIRO - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Ciidanka dawlada ayaa saaka isku balaadhiyay degmada Guriceel ee gobolka Galguduud oo hore u joogeen ciidanka Ahlusuna ee hilfaha u qaaday argagixisada. Guriceel ayaa ka mida deegaanada gurmadka looga keeni jirey xilliyada argagixisadu soo gasho Dhuusamareeb.
Hadaba saraakiisha ciidanka qaybta 21-naad oo iyagu hor kacaayay ciidanka halkaas tagey ayaa soo dhaweyn Ka helay dadka deegaanka.
Wasiirka arimaha gudaha oo isagu la kulmey odayaasha iyo shacabka magaalada ayaa u sheegay inuu jiro tabasho ay qabaan culimada Ahlu sunna laakiin uu Ka codsanayo inay fiiriyaan halganka ay ku lahaayeen loo dalka oo ayna xaqal daacin xilli guushu dhowdahay oo uu ula jeedo dawladnimo dalka wada gaarta.
Dhinaca kale gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb ayaa sheegay in degmada nabad buuxda oo laysku halayn Karo ay Ka jirto si buuxdana u ilaaliyaan ciidanka dawlada. Taageero buuxda ayaan u hayaa dawlada dhexe ayuu yiri.